गर्मी समयमा नरिवलको पानी सेवन गर्दा यस्ता अचुक फाइदा ? « News24 : Premium News Channel
गर्मी समयमा नरिवलको पानी सेवन गर्दा यस्ता अचुक फाइदा ?
काठमाडौं । गर्मीमा नरिवलको पानी पिउनु स्वस्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । यदि तपाईले बिहानै नरिवलको पानी पिउनु भयो भने दिनभर तपाईको शरीरलाई उर्जाशिल बनाउन मदत गर्दछ । साथै तपाईको शरीरलाई डिहाईड्रेशनबाट पनि बचाउँछ । नरिवलको पानी यस्तो तत्व पाइन्छ जुन् तपाईको शरीरलाई आवश्यक पर्दछ ।
प्रत्येक नरिवलमा २०० मिलीलीटर तथा सो भन्दा बढी पानी हुन्छ । यो एक लो(क्यालोरी ड्रिंक पनि हो । नरिवलको पानीमा एन्टिअक्सीडेन्टस्, अमिनो एसिड, इन्जाइम्स, बी(कम्प्लेक्स विटामिन र विटामिन-सी लगाएतको गुण पाइन्छ ।
नरिवलको पानी पिउँदा हुने फाइदाहरु यस प्रकार छन्ः
वजन कम गर्न मदत गर्छ,
विहान एक्सरसाइजपछि नरिवलको पानी पिउनु स्वस्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । नरिवलको पानीमा कम मात्रामा क्यालोरी हुन्छ, यसले वजन कम गर्न मदत गर्दछ । नरिवलको पानीमा विभिन्न प्रकारको वायोएक्टिभ इन्जाइम हुन्छ, यसले कोलेस्ट्रोलको पाचनलाई बढाउँछ ।
उच्च रक्तचापलाई कन्ट्रोल गर्दछ,
उच्च रक्तचाप कम गर्नको लागि पनि नरिवलको पानी प्रयोग गरिन्छ । यसमा विटामिन सी, पोटासियम र म्याग्नेसियम हुन्छ जसले उच्च रक्तचापलाई कन्ट्रोल गर्न मदत गर्छ । यसले हाइपरटेन्शनलाई पनि कन्ट्रोल गर्दछ ।
ह्याङ्ग -ओभरलाई कम गराउँछ,
ह्याङ्ग ओभरलाई कम गर्नको लागि पनि नरिवलको पानी प्रयोग गरिन्छ । शरीरमा भएको इलेक्ट्रोलाइट्सको कमीलाई नरिवलको पानीले आपुर्ती गर्न मदत गर्दछ र थकानलाई भगाउँछ ।
नरिवलको पानीमा कार्वोहाईड्रेडको मात्रा ज्यादा हुन्छ । यसले तपाईलाई उर्जा दिन्छ र पेटमा भएको विभिन्न प्रकारको समस्याहरुबाट टाढा राख्न मदत गर्दछ । नरिवलको पानीमा कागतीको रस मिसाएर पिउनाले शरीरमा पानीको कमी हुनबाट बचाउँछ ।
टाउको दुखाईलाई कम गराउँछ,
अधिकांश मानिसहरु टाउको दुखाईको समस्याबाट ग्रसित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा नरिवलको पानी पिउनाले शरीरमा हुने इलेक्ट्रोलाइट्सको कमीलाई आपुर्ती गर्दछ र पानीको मात्रालाई बढाउँछ । नरिवलको पानीमा पर्याप्त मात्रामा म्याग्नेसियम पाइन्छ । म्याग्नेसियमको कमीको कारण टाउको दुख्न सुरु हुन्छ । नरिवलको पानीले म्याग्नेसियमको मात्रालाई सुधारमा ल्याउँछ भने टाउको दुखाईमा कम गर्छ ।